Ukubloga Kwebhizinisi: Ukuphendula Impikiswano
Hlala Uletha Impi Ekhaya Njalo
NgoLwesibili, ngoJuni 15, i-2010 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Sibe nomhlangano omuhle ne-ejensi lapha e-Indianapolis abasebenza ukuqinisekisa ukuthi iklayenti labo liqinile isu lokubloga ezinkampani. Baqale kahle futhi sakhuluma kakhulu ngempikiswano nokubhuloga. Ibhulogi ethile abayibekayo ikhuluma ngendaba engadonsela ukugxekwa kulabo abanemibono ephikisayo.
Ngibuke izinkampani eziningana zisabela ekugxekweni okungalungile ngokuzama ukuvikela noma ukuxoxa ngokuma kwazo ku ephikisanayo ibhulogi. Isu elingalungile. Uma uza kubhulogi lami ukuvikela isikhundla sakho, awumane nje uphikisana nami, uzozithola uphikisana nebutho labalandeli abanomqondo ofanayo abafunda ibhulogi yami njalo.
Imvamisa, lapho impikiswano iqala kubhulogi lami, ngizovele ngihlale ngilinde. Imvamisa, abafundi bazongisiza futhi badabule lowo muntu abe yizicucu. Yilokhu okwenzekayo lapho ucasulwa ukuthi uyise empini yeqembu eliphikisayo. Awuphikisani nje ne-blogger - uphikisana nenethiwekhi engemva kwebhulogi. Futhi njengoba uphikisana, ukunakwa kuyanda… ukuzibandakanya kwezenhlalo kuyakhula, ukusesha kuyanda futhi uthola lokhu okuthunyelwe okuphikisayo emiphumeleni ye yakho inkampani.
Hlala uletha impi ekhaya. Uma i-blogger ibhala ngawe noma ngebhizinisi lakho kabi, sebenzisa ibhulogi yakho ukuphendula. Awudingi ngisho nokubalula… kepha isixhumanisi esibuyela kokuthunyelwe kwabo ngokujwayelekile sizobanaka ukuze babone impendulo yakho. Ngiyethemba, bazobuyela kubhulogi yakho bese bephawula. Mhlawumbe bazi kangcono! Kufanele wazi kangcono, futhi.
Okuwukuphela kwento embi ukwedlula inkampani ephendula ngqo kubhulogi labaphikisi ayiphenduli nhlobo. Kuma-media amasha, akukho mpendulo elingana nama-hubris nokuntuleka kobuqiniso. I-blogger engaphenduli ekugxekweni okwakhayo ivamise ukubhekwa njengeyimbumbulu… abekho ukuzobeka obala kepha ukuzazisa bona kuphela. Inkampani yabo kanye nebhulogi yabo yezinkampani balahlekelwa ukuthembeka nokufundwa.
Hlala uletha impi ekhaya njalo!
Ukufika Kwamavidiyo Wekhasi Kukhulisa Ukuguqulwa 130%
Ukumaketha nge-imeyili noma ukumaketha kwe-Facebook?